လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 21, 2014 Douglas Karr
အဆိုပါ infographic ၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ် ကောင်းမကောင်း, ဒါပေမယ့်ငါကအတော်လေး ဦး ခေါင်းပေါ်လက်သည်းထိမှန်ကြောင်းကိုငါမသိရ။ အားသာချက်များ (ကောင်းကျိုး) အားလုံးသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုအထောက်အကူပြုသောအလွန်ခိုင်လုံသောကိန်းဂဏန်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်အားသာချက်များသည်နားလည်မှု၊ တစ်ခုချင်းစီယူမယ်။
C-Suite ၏ ၅၀% သည်မယုံကြည်ပါ ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏တန်ဖိုး။ ၎င်းသည်ပြissuesနာများစွာဖြစ်နိုင်သည်။ ၀ န်ထမ်းများဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည် တိကျစွာသက်ရောက်မှုတိုင်းတာ နှင့်၎င်းတို့၏ C-Suite ကိုမှသင့်လျော်သောအစီရင်ခံစာများပေး။ သင်၏လူမှုရေးပရိသတ်နှင့်ထိရောက်စွာဆက်သွယ်ခြင်း၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းသူတို့အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ တိုင်းတာရန်ပိုမိုခက်ခဲဖြစ်ကြောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကို.
Social media သည် e-commerce လမ်းကြောင်း၏ ၁.၁၄% သာရှိသည်။ ငါအကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်ဤအပေါ်အတုအယောင်တောင်းဆိုတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာလူအများစုသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန် application များကိုအသုံးပြုနေကြသည်။ ဒီဟာကသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ၉၀% အထိ ဆိုရှယ်မီဒီယာလွှဲပြောင်းမှုများအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွင်းတိုင်းတာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က app တစ်ခုကနေတိုက်ရိုက် link ကိုလာနေတာပေါ့။ လူမှုမီဒီယာကမ်းလှမ်းသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖော်ပြရန်မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောင်းလဲခြင်းသည်တိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှဖြစ်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းကိုလူတိုင်းသိသည် ပါးစပ်နှုတ်မြွက်စကား ကျွန်ုပ်တို့ ၀ ယ်ယူသည့်ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိသည် - လူမှုရေးသည် WOM ဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီများ၏ ၈၅% သည်လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုစီးပွားရေးရလဒ်များနှင့်မချိတ်ဆက်ပါ။ နံပါတ် (၁) ကဲ့သို့ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်မကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ။ ထိရောက်စွာဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ခြင်း၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း၊ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၊ တိုးမြှင့်ခြင်း၊ တုံ့ပြန်ချက်များစုဆောင်းခြင်းနှင့်သင့်ဖောက်သည်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိတွေ့မှုစွမ်းရည်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်အလွန်ထိရောက်သည်။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီများက၎င်းကိုအသုံးမပြုနိုင်လျှင်၎င်းသည်သူတို့၏အမှားဖြစ်သည်။ လူမှုရေးပြtheနာမဟုတ်ပါ။
အီးမေးလ်သည်လူမှုမီဒီယာထက် ၄၀ မှ ၁ ထက် ပို၍ သာလွန်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယုံမှားစရာမရှိ…သို့သော် အကယ်၍ သင့်တွင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အီးမေးလ်လိပ်စာရှိပါက၎င်းသည်သင်နှင့်၎င်းတို့နှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ လူမှုရေးအီးမေးလ်လိပ်စာကိုစုဆောင်းရန်လုံလောက်သောဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး! လူမှုရေးဆိုင်ရာလူမှုကွန်ရက်များ၌ဤပို့စ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသည်။ ထို့နောက်လူများသည်ငါတို့ site သို့လာပြီးအီးမေးလ်တွင်စာရင်းသွင်းမည်။ ဒီလိုပန်းသီးတွေနဲ့လိမ္မော်သီးတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လို့မရပါဘူး။
ဆိုရှယ်မီဒီယာအစီအစဉ်သည် CMOs ၏အဆင့် ၆ ဆင့် (၅၈ ရာခိုင်နှုန်း) ဖြစ်သည်။။ သူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်စဉ်များတိုးတက်အောင်နှင့်မိုဘိုင်းသွားဖြစ်ပါတယ်။ ငါဒီဖော်ပြချက်ကိုဝေဖန်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထိပ်တန်းပြissueနာ (၆) ခုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အခြားမဟာဗျူဟာများအထက်တွင်သင့်အလေးချိန်ကိုပြသသည်။ သို့သော်ဤအပေါ်မှတ်စုတစ်ခု ... လူမှုရေးသည်မိုဘိုင်းဖြစ်သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အဘယ်ကြောင့်ထင်သနည်း။ ရှာဖွေလား။ ဟုတ်ကဲ့ ... ဒါပေမယ့်လူမှုရေးအဖြစ်ကောင်းစွာအရေးပါသည်။
ယခုအသစ် OutMarket infographic ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ယနေ့ခေတ်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်ဟူသောအယူအဆကိုစူးစမ်းလေ့လာသည်။ သို့သော် CMOs များအဘယ်ကြောင့်၎င်းနှင့်၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များသည်အဘယ်ကြောင့်သံသယဖြစ်နေကြသနည်းဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးကားအဘယ်နည်း။ ကောင်းကျိုးကိုကြည့်ပြီးသင့်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသင့်တော်မှုရှိအောင်ပြုလုပ်ရန်နောက်ကွယ်တွင်သင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ပါ။ ထို့နောက်မကောင်းမှုကိုကြည့်ပြီးသင်လူမှုရေးတန်ဖိုးကိုပြသပြီးရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်နေကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်သုံးချက်ကိုလိုက်နာပါ။
Tags: စီးပွားရေး kpisစီးပွားရေးရလဒ်များက c-suite ကိုအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးအသွားအလာအီးမေးလ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာထက်သာလွန်သည်လူမှုမီဒီယာနှိုင်းယှဉ်အီးမေးလ်မိုဘိုင်းဖုန်းအွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအွန်လိုင်းဗီဒီယိုလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုလူမှုရေးကြော်ငြာလူမှုရေးနှင့်မိုဘိုင်းလူမှုရေး commerce ကိုလူမှုရေးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုရှယ်မီဒီယာနည်းဗျူဟာဆိုရှယ်မီဒီယာတန်ဖိုးတီဗီကြည့်ရှုသူများ
Hyperlocal လူမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမှ5နည်းလမ်းလက်လီအကျိုးကျေးဇူးများ
29:2014 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 43 မှာ
ငါဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်၏အရေးပါမှု၏အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ပတ်သက်။ ကြေညာချက်အပေါ်သဘောတူရန်ရှိသည်။ များစွာသောကုမ္ပဏီများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသူတို့စီးပွားရေးအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုမသိကြပါ။
ဒီဇင်ဘာ 24, 2014 မှာ 5: 31 AM
လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကောင်းမှုနှင့်မကောင်းမှုအကြားသင်၏နှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုဂေါက်သီးဒေါက်ဂလပ်စ်ကလက်သည်းထိမှန်ခဲ့သည်။ ငါစိတ်ထဲတစ်ချိန်ကရှိခဲ့ဖူးတဲ့အရာအချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားရဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုကနေတစ်ဆင့်ကျွန်မရဲ့မရေရာဒွိဟကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။